ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂၄-၁-၂၀၁၃)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂၄-၁-၂၀၁၃)
ခင်ဗျားတို့ လဲ ဟိုပုတ်ခတ်၊ ဒီပုတ်ခတ်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မရှိ၊ လူထုလေးစားတဲ့ လူတွေကို တိုက်ခိုက်နေရအောင် ခင်ဗျားတို့အသိုင်းအ၀ိုင်း ကွက်ကွက်လေးမှာတင် ခင်ဗျားတို့ ကို လေးစားတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ ? ခင်ဗျားတို့ပြည်သူု့ အတွက်ထား- ကိုယ့်မိသားစုအတွက်တောင် ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့၊ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးကြပြီလဲ ? သောက်ရှက်တွေလည်း ရှိကြဦး... ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတိုးတက်မယ့် အလားအလာတွေကြောင့် အရင်လို လုပ်စားလို့ မကောင်းတဲ့ကောင်တွေ၊ အရင်က တစုတည်း စုခဲ့တဲ့ကောင်တွေ သောက်ချိုးတွေပြောင်းလာတာကို ခင်ဗျားကပါ လိုက်ယိမ်းမနေနဲ့ဒေါက်တာလွဏ်ဆွေ။ ခင်ဗျားဘလော့ဂ် ခင်ဗျားရေးချင်ရာ ရေးတာမှန်ပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခင်ဗျားပရိတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့သူမို့ လို့မနေတတ်၊ မထိုင်တတ် ၀င်ရေးလိုက်တယ်မှတ်ပါ... ကျွန်တော်ပြောနေကျ စကားရှိပါတယ် " အစိုးရက black list ထဲထည့်တာက လေဆိပ်က ၀င်မရတာလောက် ရှိမှာ၊ ပြည်သူက ကြည့်မရလို့ ကတော့ ခင်ဗျားအိမ်ကို နောက်ဖေးပေါက်ကတောင် တက်မရဖူး မှတ်ပါ" .. ပြည်သူအများဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီရင်ပြီးတာပဲ... ခင်ဗျားတို့ က ငါသိ၊ ငါတတ် သိပ်လုပ်ချင်တာကိုး... ကိုယ့်အရည်အချင်း ကိုယ်ဆန်းစစ်၊ တိုးတက်အောင်လုပ်၊ ပြီးမှ ပြည်သူကိုကယ်တယ်၊ ဆရာကြီးလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလို့ ... ရေနစ်သူကို ကယ်ချင်တဲ့ကောင်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရေကူးတတ်မှဗျ...
အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်မခံဘဲနဲ့ ဘေးထိုင် ဘုပြော အဆင့်ရောက်နေပြီး
လက်ရှိအခြေအနေ အချိန်အခါ လက္ခံနားလည်
တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အခြောက်တိုက် ဘေးထိုင် ဘုပြော ဝေဖန်နေတဲ့ကောင်တွေဟာ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခောတ်မှာ ရှိနေရင်တောင် ဒီဂျပု ကမြောက်ကခြောက်နဲ့ .. ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေမှန်း မသိဘူးလို့ဥာဏ်တထွာ တမိုက်နဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ဝေဖန်နေဦးမယ့်သူတွေ..
ဗိုလ်ချုပ်ခောတ်တုံးကလည်း (မင်းတို့ လို) သူ့ ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေ ဒေါ်စုထက်တောင်များသေး... သေမှသာ အာဇာနည်.. အာဇာနည်.. ဖြစ်နေကြတာ.. လူမိုက်ဆိုတာ နောက်မှ မှားမှန်းသိ... နောင်မှ နောင်တရကြတာ... ကြိုတင် တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း မရှိသူတွေပေါ့။
အဓိကက လူတတ်လုပ်ချင်ပြီး.. အမှန်မမြင်နိုင် အကောင်းမမြင်တတ်.. ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့.. စိတ်ဓါတ်ပဲ.. အဲဒီလိုလူ ဘယ်တော့မှ မကျေနပ်နိုင်.. စိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး...
အဆိုးမြင် အုပ်စုဆိုတာ ဘယ်ခောတ် ဘယ်စနစ်မှာ မဆိုရှိတယ်... လူတိုင်းအကြိုက်ကို မြတ်စွာဘုရားတောင် မစွမ်းနိုင်ဘူး...
အမြဲတမ်း အဆိုးမြင် အပြစ်မြင်တယ်ဆိုတာ... ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓါတ် ဓါတ်ခံ မကောင်းလို့ ဖြစ်တာ...
အင်း.... ဒီလူ..... ခုတလော အကုသိုလ် တွေ တော်တော် များလို့ သေမလောက် ဖြစ်သွားတာ တောင်မမှတ်သေး ဘူး...စိတ်ဓါတ် အခံမှ မကောင်းတာ.... အကျိုး ပေး လဲဘယ်ကောင်း မလဲ.....myochitnanda ရေးတဲ့ comment ကိုထောက် ခံပါတယ်......
သိန်းစိန် ခွေးရိုးကိုက်တွေ တော်တော်များနေပါလား
wow...REALLY good and right cartoons...God bless to those who have right bright...pls draw and creat till our country get PEACE HUMANRIGHT.EDUCATED GOVERMENT..KIND LEADERS who serve to raise poor to get well.because 95% of our country is poor and just present leaders and soliders general are rich..pls let's try hard to convert our situation. as we can..
ဒီမှာ jully soe ဆိုတဲ့ ကောင်လား၊ ကောင်မလား မသိတဲ့ဟာရေ ... သိန်းစိန်ခွေးရိုးကို ကိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကွ၊ တိုင်းပြည်အတွက် မဖြစ်နိုင်ဆုံးအခြေအနေထဲက အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်နေတဲ့လူတွေကို လိုက်ဟောင်နေတဲ့ နင်တို့တွေကကော ဘယ်သူ့အမဲရိုးကို ကိုက်နေတာလဲ၊ နင်တို့ကသာ တနေ့တခြား Myanmar Express အဖွဲ့နဲ့ တူတူလာတာ ကြည့်ရတာသူတို့ ခွေးရိုးကို ကိုက်နေကြတာလား ပြန်မေးလိုက်မယ်...
Khun Minnthein said...
တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူအပေါ် အကြွင်းမဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဒေါ်စုကို ဝေဖန်တာဟာ စိတ်ဓါတ် အင်မတန်သေးသိမ်လို့ဖြစ်မှာပါ။
ဒေါ်စုပြောတာ မှန်ပါတယ်၊ ပြည်သူသာ အဓိကပါ၊ ပြည်သူများက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်တိုင် ရုန်းကန် ရမှာပါ။ ဘယ်သူကမှာ ရော့ မင်းတို့လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နတ်၊သိကြားကမှ လာပြီး မကူညီနိုင်ပါဘူး၊
I agree with myochitnanda's comment. Ko lun swe, you should change your negative attitude. People are trying their best to improve their country. What are you doing?
အတိုက်အခံဆိုတာ၇ှိသင့်တယ် အပြိုင်အဆိုင်ဆိုတာ၇ှိသင့် တယ် ဒါမှတိုးတက်မယ် လူဆိုတာအမြဲတမ်း မှန်ကန်နေမှာ မဟုတ်ဘူး အထက်ကလူလုပ်၇ပ်တွေကို ဘေးကဝေဖန်သုံး သပ်သ တိပေးတာကို ကျေးဇူးတင်၇မှာ ဒါမှခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့ ၇ဲမွန်မြတ်သောစိတ်ဓါတ်လို့ ခေါ်တယ်။